Gabar Soomaali ah oo ka mid ahayd booliska Maine, USA oo lagu dhegan yahay - Caasimada Online
Home Warar Gabar Soomaali ah oo ka mid ahayd booliska Maine, USA oo lagu...
Gabar Soomaali ah oo ka mid ahayd booliska Maine, USA oo lagu dhegan yahay
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa soo baxaaya warar sheegaya inay shaqada iska casishay Haweeneydii ugu horreeysay oo Somali ah ee ka mid noqota Waaxda Boliska ee magaalladda Portland ee Gobalka Maine ee dalka Maraykanka Sahra Muunye Abu.
Sahra Muunye Abu, ayaa la sheegay in Waaxda Boliska magaalladda Portland ay kusoo oogtay danbiyo la xiriira inay khilaaftay amaro dhanka sharciga ciidanka ah.
Warbixin uu qoray wargeyska Press Herald ayaa lagu sheegay in Sahra Muunye Abu, ay isaga tagtay shaqada ciidanka, kadib markii ay tirsatay khaladaad dhankeeda ah.
Waxa uu intaa ku daray qoraalka in Sahra Muunye Abu la xiray bishii Janayao 13-dii ee sannadkan, kadib, markii lagu so oogay inay rabshad ka geysatay dhismo lagu caweeyo oo ku taalla magaalladda Worcester oo 64-KM galbeed kaga toosan magaalladda Boston.
Sidoo kale, waxa uu qoraalka intaa raaciyay in sarkaalada ay horey u sheegtay inaysan gelin dacwadaha lagu soo oogay, waxaana lagu amray inay dibedda ka joogto shaqada, iyadoo xor ah.
Jessica Grondin oo ku hadleysa magaca Booliska Portland ayaa sheegtay in Sahra Muunye Abu ay isku casishay rabitaankeeda iyadoo aan lagu cadaadin is casilaada.
Jessica Grondin, ayaa intaa raacisay in Sahra Muunye Abu ay fursado u heysato inay kasoo fiirsato shaqadeeda oo ay iska casishay.
Si kastaba ha ahaatee, Sahra Muunye Abu ayaa noqoneysa haweeney iminka faarujisay booska ay Soomaalida Mareykanka uga joogtay dhanka ciidanka.